အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရာတွင် အသိများလေ ပိုလွယ်လေ - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရာတွင် အသိများလေ ပိုလွယ်လေ
Posted by Kyaw Win Tun on April 9, 2012 at 13:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အကြားသန်ရန်အားထုတ်ရာတွင် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘာကို နားထောင်မလဲ ဆို သည် မှာလည်း ကွဲပြားသွားနိုင်သည်။ ပညာရပ်တစ်ခုကို အင်္ဂလိပ်စကားပြောတက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် သင်ယူဖို့ရည်ရွယ်ပါက လက်ချာဟု အများခေါ်ကြသော ဟောပြောပို့ ချချက်များကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ထို့့ပြင် ၀ိုင်းဖွဲ့ ဆွေးနွေး ပြောဟန်(seminar) ကိုလည်း ယဉ်ပါးထား ရပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့ နားထောင်စရာများကို အင်တာနက်စာအိမ်များပေါ်တွင်ရှာနိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာ သူများအတွက်သီး သန့်ဟောပြောချက်များကိုမူ သိပ်ရှာတွေ့ မည်မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန် စကားပြောနှုန်းဖြင့် ပြောသော ဟောပြောမှု၊ ဆွေး နွေးမှု စကားပြောများကိုသာ များသောအားဖြင့် နား ထောင်နိုင်ပါ လိမ့် မည်။ bbcworldservice.com bbc.co.uk စာအိမ်များတွင် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို ဆွေးနွေး ဟောပြောထားသော နားထောင်စရာများစွာ ရှိပါသည်။
ဤနေရာတွင် အခက်အခဲတစ်ခုရှိပါသည်။ ပြောသော အသံများ၊ စကားလုံးများကို အကုန် ဖမ်းမိလျင်သော်မှ နားမ လည်လိုက်သော အဖြစ်မျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆွေးနွေး ဟောပြောသော အကြောင်းအရာကို တီးမိခေါက်မိမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ဘီဘီစီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းရှိ သိပံ္ပဆိုင်ရာ သတင်းလွှာသော်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှု အစီအစဉ်သော်လည်းကောင်း၊ စာပေဆွေးနွေးမှုများကိုလည်းကောင်း နားထောင် ရာတွင် ထိုအကြောင်းတို့ ၏ အခြေခံ သဘောများကိုအနည်းငယ် တီးမိခေါက် မိရှိထားပါက မြန်မြန်နားလည်နိုင်ပါ လိမ့်မည်။
မေးစရာရှိပါသည်။ ထိုအရာတို့ ကို မသ်ိပါ။ ကျောင်းတွင်မသင်ခဲ့ရပါ။ ထို့ ကြောင့် ဘယ်လိုသိနိုင် မလဲ။ သတိပြု စရာ တစ်ခု ရှိ ပါသည်။ ၎င်းရေဒီယို အစီအစဉ်များမှာ သိပံ္ပပညာရှင် စာပေပညာရှင် ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအတွက်သာ သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ သူလိုကိုယ်လို သာမန်နားဆင်သူများအတွက် မေးမြန်းဆွေးနွေးထား ချက် များ ဖြစ်ပါသည်။ မေးမြန်းသူက နားထောင်သူများ လိုက် နိုင်မည်ဟု ထင်သည့် နေရာက စ ထားတတ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ထိုအရာတွေကို မသိ၍ စ နားမထောင်ဘူးဟု ဆင်ခြေမပေးသင့်ပဲ အကြောင်းအရာ အသစ်များကို စိတ် ၀င် စားအောင် အားထုတ်သင့်ပါသည်။
မိမိ မသိသေးသော အကြောင်းအရာကို မည်သို့ စိတ်ဝင်စားအောင် အားထုတ်ပါမလဲ။ အလွယ်ကူဆုံးမှာ မေးခွန်း ထုတ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ သတ္တ၀ါများ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်Evolution အကြောင်း ကြားလိုက် သည်ဆိုပါစို့ ။ ဘယ်သတ္တ၀ါတွေကိုပြောတာလဲ။ အဆင့်ဆင့်ဆိုတာဘာလဲ။ ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို ပြောင်း တာ ကို ခေါ်တာလဲ။ ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရော။ဘယ်လောက်ကြာသလဲ စသည့် စသည့် မေးခွန်းများကို မေးကြည့်ပါ။ နား ထောင် သည့် အစီအစဉ်တွင်ရှင်းပြထားတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ နားထောင်ရာတွင် ဘာအချက်အလက်ကို ဂရု စိုက်ရှာ ဖွေရမည်ကိုလည်း သိပြီးဖြစ်သွား ပါလိမ့်မည်။အကယ်၍ နားထောင်သည့် အစီအစဉ်တွင် မိမိသိလိုသည့် မေးခွန်း၏ အဖြေပါမလာပါက အင်တာနက်တွင် evolution theory အကြောင်းဖတ်နိုင်မည့် စာအိမ်ကို ရှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ အလွယ်အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ရေးထားသော စာအိမ်များကို ရှာလိုပါက evolution theory for kids ဟု စာရိုက်ရှာဖွေပါ။ ထိုအခါ အဖတ် စွမ်းရည်ကိုပါလေ့ကျင့်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တွင် ပညာသင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့ လာ လျင် ဟောပြော ပို့ ချမှု ပုံစံ ဆွေးနွေးမှု ပုံစံတို့ နှင့် အကျွှမ်းဝင်ရန် အကြောင်းအရာဗြောက်သောက်ကို သိထားဖို့ ရန်လိုပါသည်။ ထို့ ပြင် ထိုဗဟုသုတများက မိမိ၏လေ့လာမှုကိုပါ အထောက်အကူပေးပါသည်။အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် မိမိအထူးပြုသင်ယူနေသည့် ဘာသာရပ်နှင့်ဆက်နွယ်၍ ဆရာများက အခြားနယ်ပယ်မှ အကြောင်းအရာတို့ကို ဆက်စပ်ပြတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ နားမအ တော့ဟုပြော နိုင်ပါမည်။
ထိုမျှမကပါ။ IELTS TOEFL စသည့် စာမေးပွဲဖြေရာတွင်လည်း အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုစာမေးပွဲများတွင် အကြားစွမ်းရည်စစ်ဆေးသည့် နားထောင်စရာများတွင် ထိုထိုသော အကြောင်း အရာ များစွာပါ၏။ သိထားသော အကြောင်းအရာကို နားထောင်ရသည်က ဘာမှမသိဘဲ အသံများ စကားလုံးများကိုသာ လိုက်နားထောင်ရသည်ထက် ပို၍ လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ အဖတ်စွမ်းရည် ကိုဖြေရာ တွင်လည်း ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးရာတွင်လည်း သူ များ သုံးထားသည့် ဖန်တရာတေ အ ချက်များထက်သာအောင် ရေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမှာ များပြားလှသော သိစရာများအနက် ဘယ်အရာကို အရင်သိအောင် အားထုတ်သင့် သလဲ ဆိုသော မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်စရာများများ နားထောင်စရာများများကို ရှိရန် နိုင်ငံ တကာသတင်းများကို စတင် စိတ် ၀င်စားကြည့်ပါဟု အကြံပေးလိုပါသည်။ မြေပုံကိုလည်း ဂူဂဲလ် မြေပုံ googlemap မှရှာနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံ တစ် ခုစီ၏ ခေတ်ဟောင်း ခေတ်သစ်သမိုင်းကိုလည်း အင်တာ နက် ပေါ်တွင် လက်ချောင်း တစ်ချက်နှစ်ချက်နှိပ်ဖြင့်ပင် ရှာ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
Permalink Reply by Master Learner on April 10, 2012 at 12:18
Permalink Reply by chocholinn on April 11, 2012 at 15:20
I want to get some more share.
Permalink Reply by myomyintway on April 11, 2012 at 18:36
yes .i will try.thank you .
Permalink Reply by 17hnpovftz6sp on April 11, 2012 at 21:57
Permalink Reply by AYOOB AKHOON on April 11, 2012 at 22:07
Permalink Reply by Khin Zaw on April 12, 2012 at 13:59
Permalink Reply by Maung Maung Htoo on April 13, 2012 at 8:03
Thank you so much. I will try
Permalink Reply by soethuraaung on April 14, 2012 at 12:36
Permalink Reply by Aye Khaing on April 14, 2012 at 23:30
Permalink Reply by nay lin tun on April 15, 2012 at 18:44
Permalink Reply by sandar wai on April 15, 2012 at 19:50
Permalink Reply by Ko Zaw on April 17, 2012 at 17:33